Sahy miavaka ve ianao?
"Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, «fanjaka-mpisorona, firenena masina», olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba hilazanareo ny hatsaran'llay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga.» - 1 Pet. 2:9.
Nanjary tantara mahazatra ny sofin'ny maro ny fampitandremana ny fiavian'ny Zanak'olona tsy ho ela eny amin'ny rahon'ny lanitra. Niala tamin'ny fiandrasana sy ny fiambenana izy ireo. Ny fitiavan-tena sy ny fitiavana izao tontolo izao hita taratra eo amin'ny fiainana dia mampibaribary ny fisainan'ny fo manao hoe: «Nampihemotra ny fiaviany ny Tompoko».
Toetra tia tena, sy ny fanarahana ny fanaon'izao tontolo izao toy ny tamin'ny andron'i Noa ihany no misy amin'izao androntsika izao. Betsaka amin'ireo izay milaza fa zanak'Andriamanitra no manaraka ny fomba fanaon'izao tontolo izao miaraka amin'ny hery izay manda ny asany. Hamboly izy ireo, hividy ary hivarotra, hihinana ary hisotro, hampakatra ary hamoaka ny hampakarina, hatramin'ny ora farany hisedrana azy ireo. Betsaka amin'ireo vahoakantsika no toy izany. (...)
Reraka ny fanahiko satria hitako ny fahabangan'ny fiainam-panahy eo amintsika. Ny lamaody sy ny kolontsain'izao tontolo izao, ny avonavona, ny fitiavam-pahafinaretana, ny fitiavana fisehosehoana, ny fandanilaniam-poana amin'ny fitafiana, trano sy ny tany - ireo dia mandroba ny haren'Andriamanitra mamadika ho fampanaranam-po ny tena ny fahafaha-manao tokony hampandrosoana ny hazavan'ny fahamarinana eo amin'izao tontolo izao. (...)
Ireo zanaky ny mazava sy ny andro dia tsy tokony hamory manodidina azy ireo ny aloky ny alina sy ny haizina izay manodidina ireo mpiasan'ny faharatsiana. Mifanohitra amin'izany aza, tokony hijoro ho mahatoky eo amin'ny toerana misy azy izay hitondrany ny hazavana izy ireo, mandray ny fahazavan'Andriamanitra mba hanapariaka izany amin'ireo izay ao anatin'ny haizina. Mangataka amin'ireo vahoakany ny Tompo mba hitahiry ny fahamarinany ka tsy haka tahaka ny fanaon'ireo tsy mino an'Andriamanitra.
Tokony ho «firenena masina,olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany», maneho ny fiderana ho an'ilay niantso azy ireo «hiala tamin'ny maizina amin'ny fahazavany mahagaga» ny Kristianina (...) — TFC, 5:9-14.